8x38 Podcast: Mmetụta nke Sọftụwia Ọhụrụ Apple | Esi m mac
8 × 38 Podcast: Mmetụta nke Sọftụwia Ọhụrụ Apple
Izu a mgbe izu ole na ole gwụchara pọdkastị maka otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ, anyị jisiri ike zukọta ọzọ iji mepụta ihe ngosi dị na chanel anyị Youtube na mgbakwunye na ndekọ nke #Ngwa Mgbasa Ozi ya mere i nwere ike ige ya ntị mgbe ọ masịrị gị, nwere ike ma ọ bụ chọọ.
Obi abụọ adịghị ya na isi okwu nke izu a bụ ọbịbịa nke ụdị beta ọhụrụ, nke edepụtarala edechaa ma e wezụga anyị macOS High Sierra. Ee, ka anyị na-ede edemede a macOS Highh Sierra ọha beta Emebeghi ya maka ndị ọrụ sonyere na mmemme beta ọha, mana anyị anaghị enwe obi abụọ na ọ ga-abịa n'oge na-adịghị anya, yabụ lelee web ahụ.
N'ụzọ ezi uche dị na nkwalite ndị ị nwere ike ịnụ ụtọ na ụdị ọhụrụ nke macOS High Sierra bụ ihe ziri ezi, ha dị, mana ha abụghị ihe ha ga-ede n'ụlọ gbasara ọrụ ọhụrụ maka onye ọrụ. O nwere mmụba na Safari, njikwa nke faịlụ ma ọ bụ mgbanwe na usoro vidiyo, ihe anyị kwurula banyere ya na mbụ.
N'ọnọdụ ọ bụla, ihe anyị chọrọ bụ ka ị nwee obi ụtọ na pọdkastị a nke anyị na gị niile kọọrọ gị isi ihe nke ụwa Apple site n'itinye ọchị na enweghị nchekasị. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịkekọrịta ọwa iTunes na ndị enyi gị na ndị maara gị, naanị site na iyingomi ya njikọ ọzọ. I nwekwara ike soro anyị na netwọkụ mmekọrịta ma kesaa echiche gị, ajụjụ ma ọ bụ ntụnye gị oge ọ bụla, ndị otu a na-anabata ndị a. Cheta na ị nwekwara ike iji hashtag #podcastapple na Twitter Na mgbakwunye na ọwa ndị ọzọ, netwọkụ mmekọrịta na-enwe ike ịkpọtụrụ anyị. Izu na-abịa anyị ga-alaghachi na Podcast ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » 8 × 38 Podcast: Mmetụta nke Sọftụwia Ọhụrụ Apple
Apple weputara macOS Sierra 5 beta 10.12.6 maka ndị mmepe